Ingabe kufanelekile ukufaka amakhabethe ebhaleni?
Ngokuqinisekile wonke umnikazi wefulethi wayebhekene nenkinga yokungabi nesikhala samahhala. Ngezinye izikhathi zonke izinto ezidingekile nezingadingekile zikhuphuka ekamelweni, ngokunciphisa kakhulu indawo edingekayo endlini. Kodwa labo abanakho, ngaphezu kwefulethi, futhi i-balcony, abakucabangi ngale nkinga nhlobo. Bafaka nje konke okudingayo kanye nokulondoloza, izicathulo zonyaka kanye nezingxenye zemoto. Kodwa ngezinye izikhathi emva kweminyaka eminingana yokusebenza ibhaluni elinjalo nje alinalo izinto eziningi kakhulu - ngakho-ke kunenkinga yokubeka izinto ngokuhlelekile. Manje abantu abaningi baxazulula le nkinga ngokumane nje ngokufaka ikamera elikhethekile ebhaleni. Izithombe zezindlela zokwakha nezokuklama ezinjalo zenza kubalulekile ukukhokha ngokukhethekile isakhiwo esinjalo, ngoba ngemuva kokulungisa okunjalo abanikazi abasenayo izinkinga ngokubeka izinto ngokuhlelekile - zonke izinto zisendaweni zabo. Esihlokweni samanje, sizobheka ukuthi kungani kufanelekile ukufaka ikhompiyutha eyakhelwe ngaphakathi kubhaluni lendlu yakho.
Ngokujwayelekile, le fenisha ifakwe engxenyeni yangaphambili ye-loggia. Isizathu salokhu ukuklanywa kwalo okwandisiwe, okungaba neminyango engu-2 noma engu-4. Okungathandwa kakhulu yizinketho ezinamashalofu avulekile, njengenfenisha engenhla ayikho isidingo sokuhlelwa kahle kwezinto zonke - ungamane ubeke emashalofini owodwa noma ngaphezulu futhi uvale umnyango. Noma kunjalo, amakhabhinethi anjalo ebhaleni ayobukeka ehle kakhulu futhi ekhangayo. Ngokuphathelene nezixazululo zesakhiwo, le fenisha, ngokuya ngobukhulu be-loggia, ingaqukatha amahhovisi amaningana, kufaka phakathi aphansi, aphakathi ne-mezzanine. Ngokuvamile, ingxenye engezansi yekhabhinethi iyasuswa ukuze igcine isondlo nemifino (isb. Amazambane noma anyanisi). Ngokuqondene nengxenye engenhla, ibeka izinto ezingasetshenziswa kakhulu, kanye nemishini yocingo eyingozi ezinganeni. Amakhabhinethi afanayo ebhaleni ayadingeka kakhulu, ngoba akwazi ukulayisha ifulethi kusuka ezigqokweni ezihlukahlukene nezinye izinto ezincane. Ngakho-ke, ngokubeka kuzo izinto zangasese ezingasemqoka zesikhashana, uzonikeze ithuba elihle lokuphuma endaweni yokulungiswa kwekamelo elisha, kube yindawo yokudlela encane noma isifundo.
Iningi lamakhabhinethi ebhaleni lihlangene kusuka kuma-chipboard nasendlini yensimbi-plastic. Okukhethwa kukho kokugcina uhlaka lwama-aluminium, olufakwe nge-PVC. Ngokungafani nenketho yokuqala, leli khabhinethi lizoqina futhi lihlale liqinile, ikakhulukazi uma i-loggia yakho itholakala eceleni kwelanga. Futhi, inzuzo yalesi siklamo ukuthi akusoze ukwesaba umswakama ophezulu kanye nezinguquko ezinkulu zokushisa, okuyinto ejwayelekile ebhodini (ngaphandle kokukhethwa okufudumele). Ngokuqondene namashalofu aseKhabhinethi, kuzo zombili izinguqulo bakwazi ukubhekana nemithwalo efika ku-30-40 kilogram ngayinye.
AmaKhabhinethi emgodini - lesi yisisombululo esihle kakhulu kulabo abafuna ukufeza ukusetshenziswa okungenangqondo kwesithuba samahhala. Futhi uma ufuna ukwandisa indawo yakho, ukwenza igumbi elisha, amakhabhinethi anjalo azoba yisisombululo esihle kakhulu kule nkinga!
Indlela yokuvala iminyango yangaphakathi. Ukufakwa komnyango wokungena ngaphakathi
Umbhede webunk izingane kuyisinqumo esihle kubazali
Umlingisikazi Beren Saat: Filmography, izindima engcono, izithombe
Ukubalekela amabhere ngephupho. oneiromancy
Kuyini ubude marathon?